Fanasaziana sy Fanarenana :: Ankizivavy roa, 12 sy 14 taona, voampanga ho nandoro tanety • AoRaha
Nalefa tazonina eny amin’ny toby fitazaina zaza maditra any Faravohitra ireo ankizivavy roa, 12 sy 14 taona, samy voampanga ho nandoro tanety, teny Ankazomalaza, Mangabe ary Ankazobe, samy ao anatin’ ny kaominina Ambohimanga Rova, herinandro vitsy lasa izay. Avy amina fahadisoam-panantenana teo amin’ireto zaza no antony nandrehetan’izy ireo ny teo amin’ny toerana niaingan’ny afo, araka ny tatitra azo avy tamin’ny mpanao famotorana.
Tsy noho ny antony goavana, tahaka ny fandre mahazatra amin’ny filan’ireo mpiompy mandoro tanety mba hahafahan’ny omby miraoka ny ahitra maitso avy eo, no nahamay ny tanety efa ho 20ha, teny Ankazobe, kaominina Ambohimanga Rova. Ankizivavy roa diso fanantenana vokatry ny tsy fahitana na inona na inona teo amin’ny manodidina ny fasana vao avy nandevenana no voalaza fa niteraka hasosorana sy nahatonga azy ireo handrehitra ny afo.
Zanaka tompon’ andraikitra
Nampahafantarin’ny mpanao famotorana nanaraka akaiky an’ity raharaha ity fa vohitra masina teo amin’ny toerana niantombohan’ny fahamaizana, teny Ankazobe. Nohazavain’ iretsy voalohany hatrany fa matetika no misy zavatra latsaka foana eny manodidina ny toerana rehefa avy misy fandevenana. Nanantena ny nahita zavatra teny ireo ankizy, kinanjo tsy nisy na inona na inona, tamin’io fotoana io. Noho ny hakiviana, hoy ihany ireo mpanao fanadihadiana, no nandoran’ireo ny tanety. Fantatra, rehefa nandeha ny famotorana, fa zanaky ny lehiben’ny fokontany sy ny polisim-bohitra ireto roa vavy voatondro ho tompon’antoka tamin’ny firehetan’ny tanety manodidina ny 20ha.
Natolotra ny Fitsarana, tamin’ny alatsinainy 19 oktobra lasa teo, izy roa vavy. Naterina any amin’ny toby fitaizana zaza kamboty, taorian’izay. Mialoha izany, dia notazonina tany amin’ny tobin’ny zandarimaria ny rain’izy ireo tsirairay avy, saingy navotsotra ihany, nony avy eo.
Loza môtô roa